सर्लाहीमा कर्फ्यु आदेश जारी, १ जानाको घटनास्थलमै मृत्यु — Imandarmedia.com
सर्लाहीमा कर्फ्यु आदेश जारी, १ जानाको घटनास्थलमै मृत्यु
काठमाडौँ। प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर सर्लाहीको ईश्वरपुर क्षेत्र बिहानैदेखि तनावग्रस्त बनेको छ। स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दर्जनौँ सेल अश्रुग्यास चलाएको छ, भने दर्जनौँ राउन्ड हवाईफायर गरिएको छ।
बिहानै स्थानीय सडकमा निस्किएर प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका छन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच दर्जनौँपटक झडप भएको छ। झडपमा परेर दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी र आन्दोलकारी घाइते भएको प्रहरीले प्रारम्भिक विवरणमा दिएको छ।
यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरी भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीको ढुंगा लागेर गम्भीर घाइते भएका छन्। अन्य सुरक्षाकर्मीसमेत प्रदर्शनकारीको ढुंगा लागेर घाइते भएका छन्।
यस्तै, प्रहरीको प्रारम्भिक जानकारीअनुसार प्रदर्शनकारीतर्फ एकजनालाई खुट्टामा गहिरो चोट लागेको छ। घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ।
इलाका प्रहरी कार्यलय केशरगन्जलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चारैतिरबाट घेरामा सुरक्षा दिइरहेको छ। प्रदर्शनकारी अत्यधिक उग्र भएका कारण घटनास्थल नियन्त्रणमा लिन समस्या भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
स्थिति थप जटिल बन्दै गएपछि जिल्लामा तीनै तहका सुरक्षा अधिकारीहरू बिहानैदेखि बयलवासमा छन्। बयलवासमा निषेधाज्ञा जारी: यसैबीच सुरक्षा निकायको आपतकालीन बैठक बसेर बयलवास क्षेत्रमा दिउँसो ३ बजेबाट साँझ ७ बजेसम्म निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवाले पूर्व ईश्वरपुर नगरपालिका ४, पश्चिममा वडा नम्बर ८, उत्तरमा ईश्वरपुर ५ र दक्षिणमा वडा नम्बर ९ खोरिया टोलासम्म हुलहुज्जत गर्न, भिड गर्न, कुनै पनि सभा–सम्मेलन गर्न निषेध गरिएको छ।
आइतबार राति ईश्वरपुर नगरपालिका– ७ मा इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगन्जको गस्तीमा हिँडेको भ्यानले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलचालक ईश्वरपुर नगरपालिका– ५ निवासी ३० वर्षीय व्यवसायी रामकुमार महतोको मृत्यु भएको थियो।
घटना प्रहरीले लुकाउन खोजेको र शंकास्पद देखिएको भन्दै ईश्वरपुरका व्यापारीले सोमबार दिनभर बयलवास बजारमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। आक्रोशित समूहले इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगन्जमा ढुंगामुढा गर्नुका साथै इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरको जिपमा आगोसमेत लगाइदिएका छन्।
प्रहरीले भने रामकुमारले चलाएको मोटरसाइकल प्रहरी भ्यानमा आफैँ आएर ठोक्किएको दाबी गरेको छ। दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका महतोलाई उपचारका लागि तत्काल सदरमुकाम मलंगवास्थित जिल्ला अस्पतालमा पुर्‍याइए पनि,
उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक महतोको शव पोस्टमार्टमपश्चात् जिल्ला अस्पताल मलंगवामै राखिएको छ। माग पूरा नभएसम्म शव नबुझ्ने पीडित परिवारले बताएका छन्।
तेस्तै, पछिल्लो चार महिनामा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ३१ घटना भएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालको रेकर्डअनुसार आ.व. ०७८/७९ को ०७८ साउन १ देखि ०७८ मंसिर मसान्तसम्ममा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ३१ वटा घटना भएका हुन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन शाखामा अभिलेख भएअनुसार यसमा गिरफ्तारीका– पाँच, कब्जा/अवरोधका– दुई, आक्रमणका– दुई, धम्की/दुर्व्यवहारका– १२ र पेसागत असुरक्षाका– १० घटना रहेका छन्।
प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको अभिलेख हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १७ वटा घटना भएको काउन्सिलले बताएको छ। यस्तै प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई–दुईवटा घटना रहेको छ।
गत आ.व. ०७७/७८ मा भने ६१ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना अभिलेख भएको थियो। काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको अभिलेख राख्ने साथै कतिपय घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन एवं अनुगमन गर्दै आएको छ।